Shirkada boostada Schenker oo joojisay adeega Rinkeby | Somaliska
Shirkada Boostada ee Schenker ayaa ku dhawaaqday in aysan hada ka dib alaab geyn doonin xaafada Rinkeby ee Stockholm halkaasoo ay ku badanyihiin soo galootiga. Shirkada ayaa sabab uga dhigtay arintaan in ay u cabsadeen amaanka shaqaalaha iyo baabuurta.
Schenker ayaa war saxaafadeed ay boggooda internetka ku qoreen ku sheegay in amaanka shaqaalaha ay u cabsadeen oo sidaas darteed aysan alaab dambe geyn doonin Rinkeby ilaab amar dambe.
Schenker ayaa ka mid ah shirkadaha boostada ugu waaweyn Sweden. Shirkada ayaan faahfaahin sababaha amaanka ee ay u joojiyeen shaqada Rinkeby.
Ma ahan markii ugu horeysay ee shirkadaha iyo adeega bulshada ay shaqo joojin ka sameeyaan xaafada Rinkeby oo ay ku soo bateen rabshadaha ay sameynayaan dhalinyarada ku nool xaafada, oo weeraro joogto ah ku sameeya shaqaalaha boostada, dab damiska, ambalaaska iyo booliska.